သင်သည်ရိုမေးနီးယားသို့သွားလျှင်ဘူခါရက်စ်တွင်မနေပါကလေ့လာရေးခရီးကိုသွားပါ။ Dracula ရဲတိုက်၊ နန်းတော်များ၊ သစ်တောများနှင့်မြို့များအကြားအလွန်နီးကပ်သောနေရာများရှိသည်။
Florence ၏မျှော်စင်များ၊ သင်္ကေတများနှင့်ရှုထောင့်များ
ဖလောရင့်ကိုသင်လည်ပတ်လျှင်၎င်း၏အလယ်ခေတ်မျှော်စင်များတက်ရန်မမေ့ပါနှင့် - သူတို့သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောမြင်ကွင်းရှုထောင့်များဖြစ်သည်။ ဤအမည်များကိုချရေးပြီးပျော်မွေ့ပါ။
နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ခရီးထွက်သည့်အခါနိုင်ငံကူးလက်မှတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဆက်စာဖြစ်သည်။ အဲဒီထဲမှာပါတဲ့အချက်အလက် ...
ကျိုတို၏ပတ်ဝန်းကျင်သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောကြောင့်သူတို့ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်သေချာပါစေ - Arashiyama, Kokedera, Katsura နှင့် Fushimi Inari ထောင်နှင့်ချီသောအနီရောင် Toris များ။
မူရင်းဘာသာစကားဖြင့် Piazza San Marco ဟုလူသိများသောဤဗင်နီယန်စတုရန်းသည် ...
ထွက်ပြေးရန်အတွက်9ချစ်စရာကောင်းမြို့များ
ထွက်ခွာသွားချိန်တွင်တွေ့နိုင်စရာများစွာရှိသောစပိန်ပထဝီ ၀ င်ရှိမြို့ငယ် ၉ ခု၊ ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်လှပသောမြို့များကိုရှာဖွေပါ။
Galicia II ရှိချစ်စရာကောင်းသောမြို့ကြီးများ
ဤလှပသောပြည်သို့သွားရောက်လည်ပတ်ရန်နေရာငယ်လေး၏ဒုတိယရွေးချယ်စရာနေရာမှဂါလိလဲရှိအခြားချစ်စရာကောင်းသောမြို့ (၁၀) မြို့ကိုရှာဖွေပါ။
ခရီးသွားခြင်းသည်အလွန်ကြွယ်ဝသောအတွေ့အကြုံဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စိတ်ကိုဖွင့်ပေးပြီးအခြားလူနေမှုဘဝနေထိုင်မှုပုံစံကိုသိရန်ခွင့်ပြုသည် နိုင်ငံတိုင်း
Galicia ရှိချစ်စရာကောင်းသောမြို့ ၂၀ မှထိပ်ဆုံးဆယ်မြို့ကိုရှာဖွေပါ။ သေးငယ်တဲ့ထောင့်၌ပူဇော်ဖို့အများကြီးရှိသည်သောနေရာများ။
ဂျမေကာသည်ကမ်းခြေများနှင့်ရေဂေးများနှင့်အဓိပ္ပာယ်တူသော်လည်းများစွာကမ်းလှမ်းထားသည်။ ဂျမေကာရှိတစ်ပတ်သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ကမ်းခြေများ၊ ရေတံခွန်များ၊ တောတောင်များ၊
ကာရစ်ဘီယံကိုသင်ထင်သလား ကောင်းပြီ, ဘာဘေးဒိုးစသည်အလွန်ကောင်းသော ဦး တည်ရာဖြစ်သည်။ လှပသောကမ်းခြေများ၊ အိပ်မက်ဆိုးမက်နေသောပင်လယ်၊ ကိုလိုနီသမိုင်းနှင့်များစွာရှိသည်။
Aberdeen သည်စကော့တလန်ရှိချာ့ချ်များ၊ ကမ်းခြေများ၊ ရဲတိုက်များ၊ ဝီစကီအရက်များစက်ရုံဝီလျံဝေါလ်လာစ်အတွက်အလွန်ကောင်းသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်ဘာများထပ်လိုချင်သနည်း။ !
နိုင်ငံခြားသို့ခရီးသွားသည့်အခါခရီးသွား of ည့်တိုင်း၏အဓိကစိုးရိမ်စရာအချက်မှာ ...
Granada ပျော်မွေ့ရန် 11 မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာ
Granada တွင်ပျော်မွေ့ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာ ၁၁ ခု၊ Granada မြို့နှင့်၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်ရှိအရသာအားလုံးအတွက်အကြံဥာဏ်များကိုရှာဖွေပါ။
Gibraltar ကိုထွက်ချင်ပါသလား? ရက်အနည်းငယ်မျှဖြင့်ကျောက်ပေါ်တက်။ စားရန်၊ လမ်းလျှောက်ရန်နှင့်ပျော်မွေ့ရန်အတွက်လုံလောက်ပေသည်။
ခရီးသွားများအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုမှာလေကြောင်းလိုင်းများကသတ်မှတ်ထားသောခရီးဆောင်အိတ်များထက်သာလွန်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါဆိုရင် ...
ပြင်သစ်သို့ခရီးစဉ်တွင်နေထိုင်ရန်ကောင်းမွန်သောအတွေ့အကြုံ ၅ ခု
Lima သို့သွားရောက်ရန်5နေရာများ
Lima သည်ကိုလိုနီခေတ်သမိုင်း၊ အနုပညာနှင့်ကိုလံဘီယာမတိုင်မီသမိုင်း၊ ပန်းခြံများ၊
WorldPride Madrid 2017, မာနပါတီများနှင့်အဓိပ္ပါယ်ပြတ်သားသောလမ်းညွှန်
ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်မှ ၂ ရက်အထိမက်ဒရစ်တွင်ကျင်းပစရာများစွာရှိသည်။ `သင်ချစ်သောသူကိုချစ်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်လက်အောက်တွင်၊ မက်ဒရစ်သည် ...
Bratislava ကိုစိတ်ဝင်စားပါသလား ၎င်းသည်လျှို့ဝှက်နက်နဲသည့်အလယ်ခေတ်များနှင့်တူသလား။ ရဲတိုက်များ၊ ချာ့ချ်များ၊ ရေကန်များနှင့်အလယ်ခေတ်ဝိုင်း ၀ တ်စုံများသင်စိတ်ပျက်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
'ပြတိုက် ၅ ခု၊ နောက်ထပ်မက်ဒရစ်' လမ်းကြောင်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်း
မက်ဒရစ်ရှိ Paseo del Prado တွင်အနုပညာတြိဂံဟုလူသိများသော ... သို့မဟုတ် ...
Sigüenzaသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်မြို့ပြကျေးလက်ဒေသခရီးသွားလုပ်ငန်းခေါင်းစဉ်ဖြင့်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်
Sigüenzaသည်မကြာသေးမီကပေါ်တူဂီမှခွင့်ပြုခဲ့သည့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်မြို့ပြကျေးလက်ဒေသခရီးသွားလုပ်ငန်း၏သင်္ကေတဆုကိုရရှိခဲ့သည်။
ဒီနွေရာသီ 2017 အတွက်တူနီးရှားကမ်းခြေကိုသင်ဘယ်လိုထင်သလဲ သူတို့ဟာစစ်မှန်တဲ့ပရဒိသုဖြစ်ပြီးမင်းမှာအရာအားလုံးရှိတယ် - သမိုင်း၊ အပျက်အယွင်းတွေ၊ အစားအစာ၊ ကမ်းခြေတွေနဲ့ပျော်စရာတွေ။
ဘရာဇီးသည်တောင်အမေရိကရှိတစ်ခုတည်းသောနွေရာသီခရီးစဉ်မဟုတ်ပါ။ ဥရုဂွေးနိုင်ငံတွင်လှပသောနေရာများရှိသည် - Punta del Este, La Pedrera, Chuy ...
ဒီနွေရာသီမှာပျောက်ဆုံးမယ့်စပိန်ကမ်းခြေ ၁၀ ခု
ကျနော်တို့ဒီနွေရာသီမှာလက်လွတ်ချင်သောစပိန်ကမ်းခြေဆယ်ခုကိုရှာဖွေပါ။ ကျွန်းများကို ဖြတ်၍ မြောက်မှတောင်သို့သွားသော Arenales ။
ဒူဘိုင်းရှိ Nightlife, ပျော်စရာရှိပုံကို
မင်းဒူဘိုင်းကိုသွားမှာလား ကောင်းပြီ, ကသဲကန္တာရနှင့်စျေးဝယ်ထက်အများကြီးပိုပါတယ်, ကစိတ်ကူးညဥ့်ဘဝရှိသည်! အဝတ်အစားတွေထုပ်ပိုးပြီးမင်းကမင်းအတွက်အချိန်အများကြီးပေးမယ်။
ဥရောပ 2017 အတွက်ခရီးသွား tourist ည့်စိတ်ဝင်စားမှုအကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သောဘုရားရှိခိုးကျောင်းရှိဘုရားရှိခိုးကျောင်းတော်ဗလီ
စပိန်နိုင်ငံသည်အလွန်ကောင်းမွန်သော gastronomy, ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ပေါင်းစပ်မှုကြောင့်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများအများဆုံးဆွဲဆောင်သောနိုင်ငံများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
Cerecera 2017 ကိုဂုဏ်ပြုရန် Valle del Jerte သည်အနီရောင်ဆိုးဆေးဖြစ်သည်
နွေ ဦး ရာသီ၌ချယ်ရီပန်းပွင့်များကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းသည်အံ့မခန်းဖွယ်ရာဖြစ်သည်။ ဂျပန်၌ဤဖြစ်စဉ်ကို Sakura ဟုလူသိများသည် ...
Galician Rías Baixas ရှိအထူးထောင့်များ
ဂါလာစီယန်ရီယာဘိုင်အတ်စ်၏အထူးထောင့်အချို့၊ ရေတံခွန်များ၊ ကျွန်းများနှင့်ရဲတိုက်များသို့သွားရောက်လည်ပတ်မည်။
ကလေးများနှင့်အတူသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်ပျော်စရာပြတိုက်5နှင့်ထိုသို့ပြုမှများအတွက်အကြံပေးချက်များ
မေလ (၁၈) ရက်နေ့တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြတိုက်နေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ကျင်းပခဲ့သည်။
ဒီနွေရာသီမှာလစ္စဘွန်းကိုသွားလည်မှာလား။ ထို့ကြောင့်အရည်ပျော်မှုမှကာကွယ်ရန်၎င်း၏ကမ်းခြေတစ်လျှောက်လမ်းလျှောက်ပါ။ လစ္စဘွန်းနားမှာကမ်းခြေတွေလှတယ်၊
ပဲရစ်ရှိ5လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောနေရာများ
ပါရီသည်ရှေးဟောင်းမြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီးထူးဆန်းသောထောင့်များစွာရှိသည်။ အချို့ကိုလူသိများပြီးအချို့မှာမူသိပ်မများလှပါ။ Vampirism ၏ပြတိုက်, သင်္ချိုင်းဂူ၏ဝင်း?
နွေရာသီမှာပဲရစ်ကိုသွားမလား စိတ်မပူပါနဲ့အေးမြဖို့ရေကန်တွေအများကြီးရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးလို့နာမည်ပေးလိုက်ပါ။
Havana တွင်ဘာရက် ၃ ရက်လုပ်ရမည်နည်း
မင်းကျူးဘားကိုသွားမလား ၎င်း၏ကမ်းခြေများသို့တိုက်ရိုက်မခုန်ပါနှင့်။ ဟာဗာနာတွင် ၃ ရက်နေပြီး၎င်း၏သမိုင်း၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အမွေအနှစ်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါ။ သင်သည်အံ့ to ခြင်းမရှိတော့ပါ။
ကမ်းခြေများမှသဘာဝရှုခင်းများနှင့်ပျူငှါနွေးထွေးသောမြို့များအထိ Fuerteventura ကျွန်းပေါ်တွင်သင်မြင်တွေ့နိုင်သည့်အရာများကိုရှာဖွေပါ။
သင်သည်ပဲရစ်သို့လည်ပတ်။ အသင်းတော်များကိုနှစ်သက်ပါသလား။ သို့ဖြစ်လျှင်ဤချာ့ချ်နှင့်ချာ့ချ်လေးခုကိုသွားလည်ပါ။ သူတို့သည်လူသိနည်းသော်လည်းချစ်စရာကောင်းသည်။
အီစတာပြီးတဲ့နောက်မေလတံတားဟာနှစ်ပေါင်းများစွာမျှော်လင့်ထားတဲ့နွေရာသီအားလပ်ရက်တွေအတွက်နိဒါန်းများစွာအတွက်ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။ သူတို့အား ...
Ibiza သို့ Madrid မှ ၄ ယူရိုကျော်သွားပါ
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤကြီးမားသောသဘောတူညီချက်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီး - eDreams တွင်မက်ဒရစ်မှ Ibiza သို့ယူရို ၄ ဒေါ်လာကျော်ဖြင့်ခရီးသွားခြင်း။ ဒီအခွင့်အလမ်း၏အားသာချက်ကိုယူ!
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ထူးခြားသည့်နေရာများရှိသည်။ Titlis Suspension Bridge ကိုမယုံသင့်ပါ။ ၎င်းသည်ဥရောပရှိအမြင့်ဆုံးဆိုင်းထိန်းတံတားဖြစ်ပြီးတောင်များဖြင့်ဝိုင်းရံထားသည်။
ရာသီဥတုကောင်းလာရင်ကမ်းခြေကိုသွားချင်တယ်၊ ငါတို့areaရိယာမှာရှိတဲ့လူတွေကိုသိပြီးသားဆိုရင်ငါတို့ ...
နွေရာသီ 2017 ကိုစီစဉ်ပြီးပြီလား နေကို လိုက်၍ Almeríaဆီသို့ ဦး တည်ပါ။ လှပသောMojácarရွာနှင့်၎င်း၏အံ့မခန်းဖွယ်ကမ်းခြေများကသင့်ကိုထိုတွင်စောင့်နေလိမ့်မည်။
Atocha ၏ Basilica နှင့် Madrid ၏ Illustrious Men ၏ Pantheon
Atocha ဟုလူသိများသောမက်ဒရစ်ရှိ Plaza de Carlos V အနီးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အမျိုးသမီး၏ Basilica သည် ...
ဒီ 10 ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံး 2017 ကမ်းခြေများမှာဘယ်ဟာရှာဖွေတွေ့ရှိ။ အလှဆုံးသဲသဲသောင်ပြင်များခံစားရန်အတွက်အလွန်စိတ်ဝင်စားဖို့စာရင်း။
တစ်ခုမှာအမေရိကန်များမကြာခဏရိုက်ကူးလေ့ရှိသောဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်သောရုပ်ရှင်များတွင်အသုံးပြုသည်ထက်ပိုသည်။ ဒါကစူပါမဟုတ်ရင် ...
Almeríaရှိ Tabernas သဲကန္တာရသည်လည်ပတ်သူ as ည့်သည်အားအံ့အားသင့်စေသည့်သဘာဝတရား၏ရှားပါးမှုတစ်ခုဖြစ်သည် ...
ပါရီ၏အကောင်းဆုံးမြင်ကွင်းကျယ်အမြင် ၅ ခု
သင်ပဲရစ်ကိုသွားသည့်အခါ၎င်း၏လမ်းများမှတဆင့်လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်အမြင့်ဆုံးအဆောက်အ ဦး များတက်ခြင်းကိုမရပ်ပါနှင့်။ ပဲရစ်၏အကောင်းဆုံးမြင်ကွင်းကျယ်အချက် ၅ ချက်ကိုသိအောင်လုပ်ပါ။
5 ခုနှစ်တွင်ခရီးသွား 2017 အလွန်အထူးနေရာများ
အပေါ်ကနေ New York ကိုကြည့်ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာ 5
နယူးယောက်၏ဂုဏ်အသရေကိုတန်ဖိုးထားရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာအထက်မှဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်ဤအချက် ၅ ချက်အားအကောင်းဆုံးဓါတ်ပုံများရိုက်ယူရန်ရည်ရွယ်ပါ။
Kawagoe, တိုကျိုအနီးရှိ Little Edo
အကယ်၍ သင်သည်တိုကျိုသို့ရောက်ရှိပြီးအလွန်ခေတ်မီပြီးရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကိုပိုင်ဆိုင်ပါက Kawagoe၊ Little Edo သို့အလွန်နီးကပ်စွာသွားပြီးအလယ်ခေတ်ဂျပန်ကိုရှာဖွေပါ။
Lonely Planet အရကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးနေရာ ၁၀ ခု
Lonely Planet လမ်းညွှန်အရကမ္ဘာပေါ်တွင်ခရီးသွားရန်အကောင်းဆုံးနေရာများသည်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်ကိုရှာဖွေပါ။ အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်သွားရောက်လည်ပတ်ရမည့်အံ့သြဖွယ်ရာနေရာများ။
တိုကျိုရှိမြင်ကွင်းကျယ် ဦး တည်သောတာကာတောင်သို့လေ့လာရေးခရီး
သင်တိုကျိုကိုရောက်နေပြီးသဘာဝကိုကြည့်ချင်ပါသလား။ တနာရီခန့်သာဝေးသောတာကာအိုတောင်သို့ ဦး တည်ပါ။ ကေဘယ်လ်၊ ကားပါကင်၊ သစ်တောများ၊ ချယ်ရီပင်များ၊ မျောက်များနှင့်အကောင်းဆုံးအမြင်များ။
ဒီနေ့ဆောင်းပါးဟာကမ္ဘာမှာရှာတွေ့နိုင်တဲ့စိတ်ကူးဥမင်တွေအကြောင်းပါ။ ကျွန်ပ်တို့ထဲမှ ၆ ခုသာသင်ရွေးချင်သည်။
Malasaña, မက်ဒရစ်၏ hipster ရပ်ကွက်ပတ်လည်လမ်းလျှောက်
၂၀ ရာစု၏ ၇၀ နှင့် ၈၀ အတွင်းမက်ဒရစ်ကြုံတွေ့ခဲ့သောယဉ်ကျေးမှုနှင့်လူမှုရေးတော်လှန်ရေး ...
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ Kamakura of Great Budda နှင့်တွေ့ဆုံပါ
တိုကျိုမှာလား ရထားကိုစီး။ ရှေးဟောင်းနှင့်အံ့ဖွယ်ကောင်းသောမြို့တစ်မြို့မှstatရာမရုပ်ထုကြီးဖြစ်သောကမာကူရာ၏မဟာဗုဒ္ဓကိုလာရောက်ကြည့်ရှုပါ။
ဒီဆောင်းပါးမှာမင်းကိုပြတိုက် ၅ ခုယူဆောင်လာမယ်။ သင်မကြာမီဂျာမန်နိုင်ငံသို့သွားရန်စီစဉ်ထားပါက၎င်းတို့ထံသေချာစွာသွားပါ။
လူဇင်ဘတ်ကိုသိလား ၎င်းသည်သေးငယ်သောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သော်လည်းပြင်ပခရီးသွားလုပ်ငန်းတွင်ပျော်မွေ့ရန်အရာအားလုံးရှိသည်။ စက်ဘီးစီးသူများနှင့်တောင်တက်သူများ၊ ချိုင့်ဝှမ်းများနှင့်ရဲတိုက်များအတွက်လမ်းကြောင်းများ။
Alaska မြောက်ပိုင်း၊ ကမ္ဘာ့အကန့်အသတ်ရှိသည်
သဘာဝတရားကိုစာလုံးအကြီးနဲ့ကြိုက်ရင် Alaska ကိုမလွတ်နိုင်ဘူး။ မြောက်ဘက်သည်ပြည်နယ်၏အလတ်ဆတ်ဆုံးနှင့်အကြမ်းတမ်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီးလှပသည်။
မယုံနိုင်လောက်အောင်ဂျော်ဒန်ကိုသိဖို့အကြောင်းပြချက် ၅ ချက်
ဂျော်ဒန်သို့သွားရန်ကောင်းမွန်သောအကြောင်းပြချက်များစွာရှိသည်။ သဘာဝဥယျာဉ်များကိုလေ့လာရန်၊ သဲကန္တာရရှိရဲတိုက်များသို့သွားရောက်ရန် ...
အကယ်၍ သင်တိုကျိုကိုသွားပြီးဟိုတယ်မှာမအိပ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ဘော်ဒါဆောင်မှာလုပ်ပါ။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိလူများနှင့်ဂျပန်လူမျိုးတို့၏ကြင်နာမှုနှင့်ယဉ်ကျေးမှုများစွာကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
Andalusian ပြည်နယ်ရှိရဲတိုက် (II)
ဒီဆောင်းပါးသည် Andalusian ပြည်နယ်ရှိရဲတိုက်များအကြောင်းကိုယခင်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ ဒီတစ်ခါတော့မင်းတို့လေးယောက်ထပ်လာ ဦး မယ်။
အော့ကလန်တွင်ခရီးသွားလုပ်ငန်း ၅ ခု
အော့ကလန်သည်နယူးဇီလန်နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည် လှပသောမြို့တစ်မြို့ရှိလျှင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများစွာပြုလုပ်ပေးသည်။ သူတို့ကိုရှာဖွေပါ!
ပျံသန်းမှု၏ဖိစီးမှုကိုတိုက်ဖျက်ရန်အက်ပလီကေးရှင်း ၆ ခု
Andalusian ပြည်နယ်ရှိရဲတိုက်တစ်ခု (၁)
ယနေ့ဆောင်းပါးသည်သမိုင်းနှင့်ရဲတိုက်လောကကိုချစ်မြတ်နိုးသူများအတွက် - Andalusia နှင့်ယင်း၏ရဲတိုက်များ၊ ပြည်နယ်တစ်ခုလျှင်တစ်ခုအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
အားလပ်ရက်များအတွင်းသူတို့လည်ပတ်ခဲ့သည့်နေရာကိုအမှတ်တရလက်ဆောင်မပေးလိုသူကားမည်သူနည်း။ သူတို့အားအမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းအတော်များများ ...
ဘဲလ်ဖတ်နှင့် Dublin သို့လည်ပတ်မည်
သင်ဘဲလ်ဖတ်တွင်နေသလား သင် Dublin သို့သွားနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အနီးကပ်ရှိပြီးကြည့်စရာများစွာရှိသည်။ မြို့ကြီးနှစ်ခုစလုံးကိုဘယ်လိုစည်းလုံးစေမလဲ၊ တစ်ခုချင်းစီမှာဘာတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုချရေးပါ။
လန်ဒန်နှင့် Edinburgh သို့သွားရောက်
လန်ဒန်ကိုသွားပြီး Edinburgh ကိုသွားရင်ကော။ ဤတွင်သင့်အနေဖြင့်၎င်းကိုမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်နှင့်မြို့နှစ်မြို့လုံးသို့အဘယ်သို့လည်ပတ်ရမည်နှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်ရှိသည်။
ဒီ5စပိန်သွားရောက်ရန် 2017 နှစ်ပတ်လည်နေရာများ
ဒီ ၂၀၁၇ ကိုပဲထုတ်ဝေလိုက်ပြီ၊ ဒီနှစ်မှာငါတို့အတွက်ဘာတွေလုပ်ပေးမလဲဆိုတာကိုစစဉ်းစားဖို့အချိန်ရောက်လာပြီ။ ၁၁ ယောက်ကျန်ခဲ့တယ်
ရှေးဟောင်းအပျက်အယွင်းများ၊ ကိုလိုနီမြို့များ၊ အံ့သြဖွယ်ရာဆားငန်တိုက်ခန်းများ၊ လူများစွာတို့အတွက်သင့်အတွက် Bolivia အတွက်သင့်အတွက်ဘာရှိသည်ကိုရှာဖွေပါ။ ဤမျှလောက်များစွာသောအံ့ဘွယ်သောအမှု!
ဟနွိုင်းသည်ဗီယက်နမ်သို့သွားသောတံခါးပေါက်ဖြစ်သည်။ မြို့ဟောင်း၊ စျေးများ၊ ဘုရားကျောင်းများနှင့်ဘုရားများသိထားရန်အတွက်ရက်အနည်းငယ်သာကြာသည်။
ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက်မှဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ အထိမက်ဒရစ်တွင်တရုတ်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ကိုကျင်းပလိမ့်မည်၊
ရောမကိုသွားမလား အသုံးအများဆုံးဆွဲဆောင်မှုများနှင့်အတူမနေပါနှင့်အံ့မခန်းနှင့်ဤမျှလောက်မလည်ပတ်သောနေရာများနှင့်သိကျွမ်းရ။ မသိသောရောမနှင့်တွေ့ဆုံပါ။
ကွဲပြားခြားနားသောခရစ်စမတ်အတွက်5ဦး တည်ရာ
ဤဆောင်းပါး၌ခရစ်စမတ်နောက်တစ်ခုအတွက်သုံးမည့်နေရာ ၅ ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိသည်။ သင်သည်ခရစ်စမတ်ပွဲတော်များကိုမကြိုက်ပါကဤနေရာများသည်သင့်ကိုနှစ်သက်လိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင်သည်အီကွေဒေါသို့လည်ပတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့လျှင်တောင်ထိပ်ဖြစ်သောBañosမြို့ကိုမလွတ်ပါနှင့်။ ဒါဟာပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများချစ်သူများများအတွက်စစ်မှန်သောပရဒိသုဖြစ်ပါတယ်။
ပီရူးကမ်းရိုးတန်းရှိ Huanchaco ရှိအားလပ်ရက်များ
အကယ်၍ သင် surfing, Peru နှင့်ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုကိုနှစ်သက်လျှင် Huanchaco သည်သင်မလွဲနိုင်သည့်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှလူများနှင့်အတူ spa တစ်ခုဖြစ်သည်။
အစ္စတန်ဘူလ်သည်သမိုင်း၊ အနုပညာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုများစွာရှိသောမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။ ဤအရာအားလုံးကိုသိရန်အကောင်းဆုံးနေရာမှာရှေးဟောင်းသုတေသနပြတိုက်ဖြစ်သည်။
Burning Man အနုပညာနှင့်ဆန်းကြယ်မှုအကြားပွဲတော်
အနုပညာ၊ အီလက်ထရောနစ်ဂီတ၊ ခေတ်သစ်၊ မက်စ်မက်၊ မြင်းစီးခြင်း၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ Burning Man ပွဲတော်ဖြစ်သည်။ မင်းသူ့ကိုသိလား?
၀ ါရှင်တန်ကိုသွားမလား ထို့နောက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ Casa Balnca နှင့်ပင်တဂွန်ရှိအထင်ကရနေရာ ၂ ခုသို့လာရောက်လည်ပတ်ခြင်းကိုမမေ့ပါနှင့်။ အခမဲ့ခရီးစဥ်များရှိပါတယ်
Machu Pichu ကိုမင်းသိလား ဒါကြောင့်ပီရူးရဲ့မြို့တော်လီမာမှာအားသာချက်ယူပြီးရက်အနည်းငယ်နေပါ။ မြို့ကြီးကြီးတစ်ခုပဲ။ အင်းကာ, ကိုလိုနီ, အစားအစာ, အနုပညာ, ယဉ်ကျေးမှု။
သငျသညျ Adventures ကြိုက်? ထိုအခါသင်ကအံ့သြဖွယ်ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများရှိသည့်သေးငယ်သည့်အမေရိကန်နိုင်ငံငယ်လေးဖြစ်သောဆူရီနမ်ကိုသိနိုင်သည်။
ကော့စတာရီကာသည်ဂေဟဗေဒဆိုင်ရာပရဒိသုဖြစ်ကြောင်းလူသိများသည်။ ခရစ်စတိုဖာကိုလံဘတ်စ်ကျွန်းသည် ၁၅၀၂ တွင်ကျွန်းပေါ်သို့ရောက်ရှိသောအခါ ...
မက်ဒါဂက်စကာ, vanilla ရနံ့ပရဒိသု
အကယ်၍ သင်ဟာစူးစမ်းလေ့လာခြင်း၊ ရှာဖွေခြင်းနှင့်စွန့်စားခြင်းများကိုပြုလုပ်လိုပါကကမ္ဘာပေါ်ရှိနောက်ဆုံးပရဒိသုမာဒါဂက်စကာကိုခရီးသွားခြင်း၊
၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်ရုရှားတော်လှန်ရေး၏နှစ် ၁၀၀ ပြည့်အခမ်းအနားကိုကျင်းပပြီးသင်ခရီးစဉ်တစ်ခုကိုစီစဉ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်မော်စကိုတွင်သင်လက်လွတ်နိုင်သည့်အရာ၏ဤလမ်းညွှန်ကိုချရေးပါ
Anglesey ကျွန်း, Druids ကျွန်း
သင်ဆဲလ်တစ်ယဉ်ကျေးမှုကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါက North Wales ရှိ Anglesey ကျွန်းသို့သွားရောက်လည်ပတ်ပါ။ သင်ကြည့်လိုက်တိုင်းလှပသည်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အလွန်ကောင်းသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Todos los Santos တံတားပြီးနောက်ဟယ်လိုဝိန်းဝတ်စုံကိုဗီရိုထဲမှာသိမ်းထားပြီးတစ်ဝက်လောက် ...
Buenos Aires ရှိပြတိုက်လေးခု
သင် Buenos Aires သို့လည်ပတ်ပါသလား ဤအထူးနေရာ ၄ ခုဖြစ်သောColónပြဇာတ်ရုံ၊ Evita ပြတိုက်၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးပြတိုက်နှင့် Barolo နန်းတော်သို့သွားလည်ပါ။
ကော့စတာရီကာကာရစ်ဘီယံဒေသကို ဖြတ်၍ ကမ်းခြေများ၊ သစ်တောများ၊ ရေတံခွန်များ၊ တောင်တန်းများ၊ ကျေးရွာများနှင့်အဆုံးမဲ့အခြားအံ့ဖွယ်ရာများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါ။
အနားယူရန်နှင့် "ကောင်းမွန်သောဘဝ" ရှာဖွေရန်နေရာများ (၂)
သင်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုများမှအနားယူခြင်း၊ ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်သန့်စင်ဆေးရည်ကိုရှာဖွေလိုပါကသွားရန်နောက်ထပ် ၅ နေရာ။ သူတို့ကို, သင့်ရဲ့အစားအစာကိုလည်းဂရုစိုက်သည်
အနားယူရန်နှင့် "ကောင်းမွန်သောဘဝ" ရှာဖွေရန်နေရာများ (၁)
ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံမှန်အပန်းဖြေအနားယူရန်နှင့်အပန်းဖြေရန်အတွက်စံပြအပန်းဖြေစခန်း ၅ ခုသို့မဟုတ်ဟိုတယ်များကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ မနက်ဖြန်နောက်ထပ် ၅ ခု။
အိုက်စလန်သည်စျေးကြီးသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုသင်ထင်ပါသလား။ သင်အမြဲတမ်းသိမ်းဆည်းထားနိုင်ပြီး၎င်းသည်မြို့တော်၊ ရက်ယာဗစ်သို့စျေးပေါသောခရီးကိုအဆိုပြုသည်။
ယခုဆောင်း ဦး ရာသီတွင်စပိန်နိုင်ငံသစ်တောများမှလေးကြိမ်ခရီးထွက်သည်
ဆောင်း ဦး သည်စပိန်နိုင်ငံ၏ထောင့်တစ်နေရာသို့ဆိုင်းငံ့ထားရန်ထွက်ပြေးရန်အချိန်ကောင်းဖြစ်သည်။ အပူချိန်…
သြစတြေးလျကိုခရီးသွားနေသလားဆစ်ဒနီမဲလ်ဘုန်းမြို့နှင့်မဝေးဘဲကင်ဘာရာကိုစမ်းကြည့်ပါ ဦး ။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့ကမြို့တော်ဖြစ်ပါတယ်။
သင်တစ် ဦး selfie ယူချင်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာထူးခြားတဲ့တံတား 5
ဤ post နှင့်ဆက်သွယ်ထားသောတံတားများသည်ကမ်းခြေနှစ်ခုကြားဆက်သွယ်မှုတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပါ။ ငါသိတယ်…
ကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုကိုခံစားရန်အတွင်းပိုင်းရေကန်များသို့မဟုတ်ရေခဲနှင့်အတူအံ့မခန်းဂူနှင့်အတူကမ္ဘာတဝှမ်းမြေအောက်ရှုခင်းများ 10 ရှာဖွေပါ။
ဆလိုဗေးနီးတွင်7မယုံနိုင်စရာနေရာများ
သင်ခရီးသွားရာတွင်အထူးနေရာများရှိသောဆလိုဗေးနီးယားနိုင်ငံ၌သင်မလွတ်နိုင်သည့်မယုံနိုင်စရာနေရာ ၇ ခုကိုရှာဖွေပါ။
စတော့ဟုမ်းကိုသွားတဲ့အခါဒီအံ့သြစရာကောင်းတဲ့မြို့တော်လေးခုကိုသေချာအောင်လုပ်ပါ။ သရဲတွေ၊ ကျော်ကြားတဲ့စာအုပ်တွေ၊ မျက်နှာကြက်တွေ၊
မက်ဒရစ်ရှိ Plaza မြို့တော်ဝန်၏မြင်ကွင်းကျယ်အောက်တိုဘာလ ၁၂ ရက်တွင်စပိန်အမျိုးသားပွဲတော်ကျင်းပမည်
နွေရာသီတစ်နှစ်ပတ်လုံးနီးပါးနေရာတစ်ခုလိုချင်ပါသလား။ ထို့နောက်ကာရေဘီယံကျွန်းသို့လှည့်လည်။ လှပသော Santa Lucia ကျွန်းကိုခံစားပါ။ သင်နောင်တမရပါ
မင်းတို့မသိခဲ့သည့်ပါရီ၏သိလိုမှု ၁၀ ​​ချက်ကိုငါတို့အားပြသပြီးသင့်အားမြို့သစ်ကိုမျက်လုံးအသစ်ဖြင့်မြင်စေလိမ့်မည်။
ဘဲလ်ဖတ်ကိုမသွားနဲ့၊ ဒီဟာ Titanic နဲ့ Thrones စစ်ပွဲတွေကနေထွက်ခွာလာတဲ့မြို့ဖြစ်တယ်။ ဒါကိုလက်လွတ်မထားပါနဲ့
ဤသည်ပေါ်တူဂီရှိ Cristiano Ronaldo ရဲ့ဟိုတယ်များ
ဘောလုံးသည်အားကစားတစ်ခုဖြစ်ပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိသန်းပေါင်းများစွာသောနောက်လိုက်များနှင့်ကမ္ဘာချီဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ကလပ်များ ...
ကိပ် Verde အားလပ်ရက်
ကိပ် Verde ကိုသွားရဲသလား။ ဒီလမ်းညွှန်ကိုလိုက်နာပါ။
ကိုလံဘီယာကို ဖြတ်၍ ခရီးစဉ်တွင်လက်တင်အမေရိကရှိအကောင်းဆုံးပွဲတော်ဖြစ်သော Barranquilla သို့သွားရန်မမေ့ပါနှင့်။
ကျူးဗား၊ ဟာဗာနာမှကီလိုမီတာ ၁၄၀ အကွာရှိဗရာဒိုရိုကမ်းခြေ
Varadero သဲသောင်ပြင်, ငါတို့မယုံနိုင်လောက်အောင်ဒေသ၏ Havana (ကျူးဘား) မှကီလိုမီတာ 140 အကွာအဝေး၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုသင်တို့အားပြောပြပါမည်။
ဂျမေကာကိုသွားမလား အေးဆေး! ဒီကာရစ်ဘီယံပရဒိသုမှာသင်လုပ်နိုင်သမျှတွေရေးချပါ။
လှပသောသဲသောင်ပြင်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သော Galicia ရှိအကောင်းဆုံးကမ်းခြေများအနက်မှတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားပြောပြပါမည်။
မင်းမော်လတာကိုသွားမလား သူတို့ကရှုခင်းများကျွန်းများ၊ သမိုင်း၊ ရှေးဟောင်းဘုရားရှိခိုးကျောင်းများနှင့်အရသာရှိသော gastronomy ဖြစ်သည်။ ဒါကိုလက်လွတ်မထားပါနဲ့
ပင်လယ်နက်နဲသောပင်လယ်ရေနက်နဲမှုသည် ၄ ​​င်းတို့၏ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်များကိုသိရှိရန်၎င်း၏ရေထဲသို့ ၀ င်ဝံ့သူများအတွက်သိုထားသည့်စစ်မှန်သောရတနာများကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။
Almeríaရှိ Tabernas သဲကန္တာရသို့သို့မဟုတ်စပိန် Far West သို့သွားပါ
အိုင်ဘာရီယန်ကျွန်းဆွယ်၏ရှားပါးမှုများအနက်တစ်ခုမှာဥရောပရှိတစ်ခုတည်းသောသဲကန္တာရဖြစ်သောတာဘာနာသဲကန္တာရဖြစ်သည်။ တည်ရှိသည် ...
ပြီးခဲ့တဲ့ဆောင်းပါးမှာမင်းတို့ကမင်းတို့ကိုကမ္ဘာပေါ်ရှိအချို့ဒေသများသို့သွားလျှင်“ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်” လို့ရသောကျော်ကြားသောရုပ်ထုအချို့နှင့်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။
အကယ်၍ သင်သည်သာယာလှပသောအနားယူခြင်းနှင့်သာယာလှပသောပရဒိသုဥယျာဉ်တွင်နေခြင်းဖြင့်ခရီးသွားလိုသောခရီးသွားများထဲမှတစ်ယောက်ဖြစ်လျှင် ...
Galicia ရှိအတ္တလန္တိတ်ကျွန်းများ၏အမျိုးသားရေကြောင်း - မြေပြင်ဥယျာဉ်
Galicia ရှိအတ္တလန္တိတ်ကျွန်းများ၏ National Maritime-Terrestrial Park သည်Cíesမှ Slvora သို့ကျွန်းများစွာသို့သွားရောက်ရန်ရှိသည်။
ကာရစ်ဘီယံတွင်ဘာဘေးဒိုးစ်နှင့်၎င်း၏ကမ်းခြေများကဲ့သို့ဘာမှမရှိပါ။ Rihanna ကအဲ့ဒီကနေလာတာသိလား
Galicia6မှော်ထောင့်
Galicia ရှိမှော်သောထောင့်အနည်းငယ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါ။ ထိုနေရာသည်ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွင်၎င်းအားကမ်းလှမ်းထားသောအရာအားလုံးကြောင့်ဆက်လက်ရှင်သန်ကြီးထွားစေပါသည်။
ပြတိုက်များ၊ ပြခန်းများ၊ တက္ကသိုလ်နှင့်အီတလီနိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံးအစားအစာများရှိသော Bologna ၏အံ့ဖွယ်ရာများကိုရှာဖွေပါ။
Dubrovnik ၏ထောင့်များသိခြင်း, Adriatic ၏ပုလဲ
Dubrovnik သည်ဥရောပရှိဖက်ရှင်မြို့များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ Dalmatian ကမ်းခြေရှိဤမြို့၏လှပမှုသည်…
ကမ္ဘာပေါ်တွင်အလှဆုံးသဲကန္တာရ ၆ ခု
ပါတီကျော်လွန်ပြီး Ibiza ကိုရှာဖွေပါ
Ibiza ကျွန်းသည်ပါတီပွဲတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် Dalt Vilas မှစျေးများအထိမြင်နိုင်မည့်အရာများရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မည်။
Jungfrau ပန်းခြံ, Interlaken အတွက်ရှေးဟောင်းနက်နဲသောအရာ
ရှေးဟောင်းအာကာသယာဉ်မှူးများနှင့်ဂြိုလ်သားသီအိုရီများကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါက Interlaken ရှိ Von Dänikenပန်းခြံ၊ Jungfrau Park၊
ခွေးများသည်များသောအားဖြင့်နေရောင်ခြည်မ ၀ င်မှီတိုင်အောင်နေရောင်ခြည်ကိုမကြိုက်သော်လည်းပင်လယ်ထဲသို့ ၀ င်လိုသည်ကိုနှစ်သက်ကြသည်။ မရှိရင်…
နွေရာသီသည်မပြီးဆုံးသေးပါ၊ ထို့ကြောင့်ပဲရစ်မြို့ရှိဂီတ၊ ပြဇာတ်ရုံ၊ ကမ်းခြေ၊ ရုပ်ရှင်ရုံများတွင်ပျော်မွေ့ရန်ဤအကြံပြုချက်များကိုချရေးပါ။
သမိုင်းချစ်သူများအတွက်7နေရာများ
သမိုင်းဆိုင်ရာရိုက်ကူးခြင်းများအတွက်ခရီးစဉ်များသည်အီဂျစ်ပိရမစ်များမှ Stonehenge အထိကျွန်ုပ်တို့ပြသသည့်နေရာများရှိသည်။
နွေရာသီတွင်ပျော်မွေ့ရန် Dublin မှလေ့လာရေးခရီးငါးခု
Dublin ၌သင်လမ်းလျှောက်နိုင်သည်ကဥပမာ၊ Dublin Bay ၏ကမ်းရိုးတန်းကျေးရွာများနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့လှတယ်!
Mijas အတွက်ကမ်းခြေများနှင့် coves
ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့မာဂရာကော့စ်ဒီလာလ်ရဲ့အဓိကခရီးသွား one ည့်နေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Mijas မှာတွေ့နိုင်တဲ့ကမ်းခြေများနှင့်ကမ်းခြေများကိုသိရှိကြသည်။
စကော့တလန်သည်ရဲတိုက်များကြောင့်ကျော်ကြားပြီးအကောင်းဆုံး၊ အလှဆုံး၊ မမေ့နိုင်